Nezvedu - Amazons Furniture Zvishandiso Co. Ltd.
Yamazonhome yakavambwa muna2012, pakutanga yainyanya kuita kugadzirwa kwemakabati eAmerica neEuropean fenicha yazvino. Ikozvino, chave chipenga chepakati-chakakura mutengesi, anokwanisa kupa masofa akasimudzwa, fenicha yakasimba yehuni, fenicha yepaneru, fenicha yemhuka uye zvemitambo. Iyo kambani ine vashandi zana nemakumi masere uye chirimwa chinofukidza nzvimbo inosvika zviuru gumi nezvisere zvemamirimita. Iyo iri panhamba 300 Yuanfeng Street, Shouguang Guta, Shandong Province. Iyo ine matatu akazara michina yekugadzira fenicha mitsara, otomatiki mapaneru ekucheka michina, kumucheto banding michina, kubaya michina, uye CNC michina nzvimbo. Uye mimwe midziyo yekugadzira fenicha. Kune vashanu vanogadzira fenicha yakasimba yehuni, fanicha yepaneru, uye fenicha yemhuka, vanogona kugadzira nekugadzira mhando dzakasiyana dzemidziyo zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Muna 2020, kambani ichavhura timu nyowani yemitambo R & D timu, iri kunyanya kuita muR & D uye kugadzirwa kwemafashibhodhi nezvikepe zvinokwenenzverwa. Zvigadzirwa zvekambani zvinotengeswa kune dzakasiyana nyika nematunhu muEurope, America, Middle East, Africa neSouth America, uye gore rekutengesa rinopfuura mamirioni makumi matanhatu emadhora ekuAmerica. Welcome vatengi mhiri kwemakungwa kushanyira boka redu uye kurukura pamwe.
Hunhu hwedu ndiwo moyo wetsika nemagariro edu. Ivo vanoshanda sekambasi, mukuti ivo vanotsanangura nzira yebasa. Ivo vanopa kubatana kwechinangwa pamatanho ese ehunhu hwehurongwa.
Yamazonhome yakatanga kubva mukugadzirwa kwemidziyo yemahofisi uye ikozvino yakagadziriswa kuita bhizimusi hombe rekugadzira ficha inosanganisa kugadzirwa nekutengesa kwemasofa akapfava, fenicha yemhuka, fenicha yemapuranga yakavezwa uye, zvigadzirwa zvemidziyo. Iyo kambani yakatanga kuvambwa nemukuru wevanhu Meng Linggang. Zvichienderana nemafungire ekutsvaga kupona nekuvimbika uye kutsvaga kusimudzira nehunyanzvi, kambani iri kushingairira kufambira mberi munzira yekuyambuka-muganho e-commerce fenicha chigadzirwa mabhizinesi ekugadzira.
Iyo yazvino fenicha yekugadzira tambo ichangobva kuvakwa neYamazon inogonesa kuburitsa pagore kwe72,000 mativi metres epaneru fanicha. Gadzira mabasa matsva makumi matatu nemapfumbamwe, unza mari zhinji kumhuri makumi matatu nemapfumbamwe uye gadzira mamwe evhangeri kumhuri dzevashandi